Wafti balaaran oo ka socda Maalmul Goboleedka Wasaaradda Waxbrashada Jubaland ayaa kulan la qaatay Shaqalaha Waxbarashada Puntland. – Ministry of Education in Puntland
By editor	/ November 27, 2018
11/27\_2018. Agaasimaha Guud Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee Dowlada Puntland ayaa Maanta soo dhaweeyey Wafti ka socda Waxbarashada Maamul goboleedka jubland oo aqoon kororsi u yimi Puntland ee Xarunteeda Waxbarashada ee xarunta dhexe Magalada Garowe .
Aqoon koror sigaan ayaa la Xariira habka Maamulka Waxbarshada iyo in khibrado iyo macluumad dheerad ah la kala helo iyagoo ay ka faa’iidaysan doonan dhamaan agaasime waxaayaha kala duwan ee Wasaarada Waxbarashada jubland.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare Maxamed Cali faarax (Farmayeeri) ayaa kula dardaarmay in maamulka tababarkan qaadanaya in ay ka faa’iideestan aqoon kororsiga Waxbarshada Puntland .
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare Maxamed Cali Faarax oo shir gudoomiye ka ahaa shirka daahfurkiisa ka hadlay isagoo Maamulka Wasaaradda Waxbarashada jubland amaanay yirina meeshii la rabay soo maraysaa Waxbarashada Jubaland, macluumad fiicana ay ka helyaan Wasaarada Waxbarshada Puntland, waxyaabaha ay ka faa’idaystaan in bulshada ay ku celin doonaan jubaland.
Agaasimha Waaxyada kala duwan ee Wasaaradda Waxbaarshada jubland ayaa aad ugu faraxsanaa inay ka faiidaystaan aqoonta Waxbarashada puntland iyadoo dadaal dheer loo soo maray.
Agaasima Waaxeedada Puntland ayaa Agaasime walaba tusaya shaqada uu hayo mid walba, kadibna waxay booqan doonan Jaamacadaha kuliyada Tababarka macalimiinta ee GTEC oo agab Waxbarasho oo dhamaystaran laga helayo iyo Jaamacada psu iyo Xarunta Farsamada gacanta.
Wasiirka Waxbarashada Puntland Abshir Yuusuf Aw ciise ayaa aad uga mahad celiyey Waftiga Waxbarashada Jubaland isagoo ku tilmaamay arin mihiima oo soomaliya inay ka soo kabato bur burkii Waxbarshada loo gaystay lana helo dhamaan Waxbarasho tayo leh lana soo saaro macalin iyo arday wanagsan.
Wasiir Abshir ayaa aad ugu faraxsanaa in uu ku arko ardaydisii oo ka mid ahaa agaasimayaasha Waxbarashada Jubland, waxaa kale oo wasiirku sheegay in jubland iyo maamul goboleedka soomaliyeedba ina khibrado is dhaafsano wada shaqayn fiicana oo waxbarshada ahna naga dhaxayso.
Maaha markii ugu horaysay oo wafti balaran oo Waxbarshada jubaland yimadan aqoon khibrad badana ka qaatan Puntland.
Agaasimayaasha Waxbarashada Jubland ayaa ka faiidaysan doona, Habka imtixaamdka Qaadista iyo dajinta loo diyaariyo, Manahjka Waxbarashada, Waxbarashada Asaasiga ah, Waxbarashada Dadban, Waxbarashada Farsamada gacanta, Maamulka iyo Maaliyada, iyo xog uruurinta Waxbarashada (Emista).
Kulankaan ayaa dhamaan waxaa ka soo qayb galay agaasime Waaxeedda kala duwan ee Wasaarada Waxbarashada Puntland.
Hoos ka Daawo Sawiradii
By: Deeq Hurevov Madaxa isku xirka Wasaarada Waxbarshada iyo Tacliinta sare.